I Ahaba na Akaba dia mpanjakan' i Israely tamin' ny taona 874 hatramin' ny 853 tal. J.K. Tsy tahaka ireo mpanjakan' i Israely sy ny mpanjakan' i Jodà maro izy ao amin' ny Baiboly fa nanokanany ampahany lehibe (mihoatra ny toko valo ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka), angamba noho ny tsy fifanarahany tamin' ny mpaminany Elia izay manana ny anjara toerany lehibe eo amin' ny fivavahana jiosy.
Atao hoe אַחְאָב / ʼAḥʼāḇ izy amin' ny teny hebreo fa Ἀχαάβ / Akhaab amin' ny teny grika ary Achab amin' ny teny latina.
Asehon' ny Baiboly ho mpanjaka tsy tia vavaka izy. Noho ny fihavanany tamin' ny Foinikia (na Fenisia) dia nanambady an' i Jezebela (na Jezabela) andriambavy foinikiana izay nitarika azy tamin' ny fanompoana ny andriamanitra Baala izy. Nananganany tempoly izany andriamanitra izany ka izany rehetra izany dia nampifanohitra azy tamin' ireo mpaminany izay nenjehiny, indrindra i Elia.
Tantarain' ny Baiboly ny sorona natao tao amin' ny tendrombohitra Karmela izay nanoheran' i Elia ny mpaminanin' i Baala sy nandripahany ny 450 amin' izy ireo izay tena akaiky an' i Jezebela sy nirahin' i Ahaba (na Akaba). Voatantara ao koa ny amin' ny tanim-boalobok' i Nabota notsiriritin' i Ahaba izay niteraka ny fiampangana tsy marina nataon' i Jezebela (na Jezabela) an' i Nabota mba hamonoana an' i Nabota hahamora ny fakana ilay tany ka nahatonga an' i Elia nanameloka sy nanambara ny hahafatesan' ny mpanjaka mivady.
Tsy tia nanompo an' i Iahveh i Ahaba nefa niantso azy rehefa nataon' ny Ben-Hadada II mpanjakan' i Arama-Damasy fahirano i Samaria ka afa-doza tao. Matetika izy no nandresy ny tafik' i Ben-Hadada ka nanagadra azy nefa nanafaka azy indray taty aoriana. Tsy nifanaraka tamin' ny eritreritr' ireo mpaminany tsy nankasitraka ny fiarahana sy fihavanana amin' ireo firenena jentilisa izany satria tokony hapetraka eo am-pelantanan' i Iahveh manontolo ny Fanjakan' i Israely.
Nihavana tamin' ny Fanjakan' i Jodà i Ahaba ka nandray an' i Jôsafata sy nanao fanekem-pihavanana ara-tafika taminy no sady nampanambady ny zanany vavy (na anabaviny) atao hoe Atalia tamin' i Jôrama zanaka lahin' i Jôsafata.
Fotoana fohy taorian' izany dia nisy indray ny ady ka azon' i Ben-Hadada II mpanjakan' i Arama-Damasy ny tanàna Ramôta-Gileada (na Ramôta ao Galaada). Noho izany dia niangavy an' i Jôsafata hiaraka aminy i Ahaba mba hamerina indray ny tanàna. Nanaiky izany i Jôsafata nefa nitady hevitra tamin' Andriamanitra tamin' ny alalan' ny mpaminany aloha. Naminany fandresena ny 400 tamin' ireo mpaminany manodidina an' i Ahaba fa i Jôsafata kosa nangataka ny hanontaniana mpaminany hafa ka ny mpaminany Mikà (na Mikea) zanak' i Jimla no nanontaniana na dia teo aza ny lolompon' i Ahaba taminy. Naminany faharesena i Mikà nefa tsy nino ny fahamarinan' izany i Ahaba ka nampisambotra azy. Nandeha hiady i Ahaba sy i Jôsafata nefa na dia teo aza ny tetik' i Ahaba izay nanao ny tsy hahafantarana ny tarehiny dia nahalala azy ihany ny miaramila avy ao Arama ka nahavoa azy tamin' ny zana-tsipìka izay nahafaty azy, fa ny mpanjakan' i Jodà kosa tsy novonoiny. Nosotroin' ny alika ny rany, araka ny efa nolazain' i Elia mialoha.
Ny zanak' izy ireo, dia i Ahazia (na Ôkôziasa) sy i Jôrama, no nandimby an' i Ahaba sy an' i Jôsafata teo amin' ny fitondrana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahaba&oldid=1042118"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 13:48 ity pejy ity.